Rita, Writing for My Sake!: ပြန်တင်ချင်တဲ့ comment တစ်ခု
Posted by Rita at 1/14/2010 10:19:00 PM
မရီတာ ရေးထားတာတွေအာလုံးကိုဖတ်သွားတယ်.နားလည်တာရှိသလို နားမလည်တာလည်းရှိ၏၊ ပြန်တင်ချင်တဲ့ comment တစ်ခုကိုတော့သေသေချာချာ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာကိုဦးတည်ပီ ဘာကိုရည်ရွယ်ချက်ထား ရေးမှန်း မသိရိုးအမှန်ပါ.ဒါကြောင့် ကွန်မန့်ပေး တာများ ဦးတည်ချက်နဲ့ လွဲသွားရင် ခွင့်လွတ် ပါ.မရီတာပြောတဲ့အနှစ်ကတော့-----ဆိုတဲ့ဟာက ဒီနေရာမှာ ကွန်မန့်ပေးမဲ့ အနှစ်နဲ့တော့ တချို့မ တူပါဘူး.
အနှစ်ကတော့ ------ရဟန်းတိုင်းသက်န်ဝတ်ပီ၊ သင်က်န်းဝတ်တိုင်းရဟန်းမဟုတ်ပါ။
အို..အသိဥာဏ်နည်းပါးလိုက်တာ ။ "သင်္ကန်းဝတ်ရင် ရဟန်းဖြစ်ပြီ။" တဲ့...ဒေါ်ရီတာရယ်..စာတွေဖတ်လာသမျှ ဒီတစ်ချက်ကတော့....ခေါင်းမာနေမဲ့အစား၊ ပြန်ရန်မူနေမဲ့အစား သေချာ စဉ်းစားစေချင်မိပါတယ်။ သင်္ကန်းကို ခါးမှာ ပတ်တိုင်း ရဟန်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ရဟန်းတိုင်းကတော့ သင်္ကန်းဝတ်ကြပါတယ်။ နားလည်နိုင်ပါစေ....
ဦးဇင်း ကို သေချာပြန်မလို့ပါ။ ရုံးမှာမို့ ခု မပြန်ဖြစ်သေးပါ။ ညကျမှ email ပို့ဖြစ်ရင် ပို့၊ ဒါမှ မဟုတ်လဲ gtalk ကနေ ပြောပါမယ် ဘုရား။ ဦးဇင်းကို မေးစရာလည်း ရှိသေးတာကြောင့်ပါ။
Anonymous << မှန်တယ်။
အဲဒါကြောင့် ရဟန်းလို့ မသုံးဘဲ သင်္ကန်းဝတ်လုိ့ ကိုယ် တောက်လျောက် သုံးလာတာရော မြင်မိပါသလား။
ရဟန်းလို မကျင့်ချင်ဘဲ လူလိုကျင့်နေချင်ရင် သင်္ကန်းကို ဝတ်မနေသင့်ဘူး။ လူလိုပဲ နေသင့်တယ်။
ရဟန်းအသွင်ယူရင် ရဟန်းလို ကျင့်သင့်တယ်။
သာသနာ့ဘောင်ဟာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုရာ အရပ်မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ်ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ဆိုတာ (ခေါင်းမာနေမဲ့အစား၊ ပြန်ရန်မူနေမဲ့အစား သေချာ စဉ်းစားစေချင်မိပါတယ်။ နားလည်နိုင်ပါစေ။) << လက်ညောင်းလို့ Anonymous ရေးထားတာပဲ ပြန်ပြီး copy လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
(သင်္ကန်းဝတ်ပြီးထားရင်တော့ ရဟန်းလိုကျင့်မှရမယ်။) လို့ ရေးထားတာကိုရော နားလည်ပါသလား။ ဘာကြောင့်ပဲ ဝတ်ဝတ် သင်္ကန်းဝတ်ပြီးထားရင်တော့ ရဟန်းလိုကျင့်မှ သင့်တော်မယ် လို့ ဆိုလိုတယ်။ မကျင့်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ သာသနာကို စော်ကားရာကျတာပေါ့။ နားလည်မိပါသလား။
မလည်ဘူး ဆိုရင် အပေါ်ဆုံးက ပြောထားတဲ့ စကားလုံးကို ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ပြောလိုက်ပါ။
(အို..အသိဥာဏ်နည်းပါးလိုက်တာ) << တော်ကြာ ဘာကို ပြောမှန်း မသိ ဖြစ်နေဦးမှာ မြင်ယောင်လို့ copy ပဲ ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
ခင်ဗျားလို ဂေါက်တောက်တောက် မျက်နှာပေးနဲ့ စုတ်ပြတ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ အခုလို ပို့စ်တွေ ရေးတင်နေတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်ကို သွားတော့မယ်ဆိုတာ သတိထားမိပါသလား...။ စာများများဖတ်ပါ။ ဖတ်ပြီးလည်း တွေးခေါ်ပါ။ ခင်ဗျား ဦးနှောက် မီးခြစ်ဆံလောက်နဲ့ လိုက်တိုင်းတာ တွေးမနေဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကွန်းမန့်ကိုလဲ ခင်ဗျားလူအထင်ကြီးအောင် တင်ထားတဲ့ သတ္တိနှင့် တဖက်သားအပေါ် စဉ်းစား ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းတို့ ဟန်ချက်ညီနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်..ဆိုတဲ့အတိုင်း .. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ချင့်ချိန်နိုင်ဖို့ တင်ရဲရင် တင်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ ကွန်းမန့် များများ ရချင်ရင် တခြားနည်းနဲ့ လှုပ်ရှားပါ။ သာသနာတော်တွေ..ဂမ္ဘီရပညာတွေ မပါလာရင် ကောင်းမယ်ဗျာ.။ စေတနာဗရပွနဲ့ အကြံပေးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားလို ဂေါက်တွေများလာရင် ဂေါက်သီးဂိုဏ်း ဖြစ်သွားမှာ စိုးလို့ပဲ။ ခင်ဗျား ဘယ်သူဆိုတာ .. သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။